Ann Smarty's Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Ann Smarty
Maitiro Ekutyaira Yakawanda Traffic uye Shanduko kubva kuSocial Media
Chishanu, June 24, 2022 Chishanu, June 24, 2022 Ann Smarty
Midhiya yemagariro inzira huru yekugadzira traffic uye kuzivikanwa kwemhando asi hazvisi nyore kune shanduko yekukurumidza kana kutungamira chizvarwa. Muzvarirwo, masocial media mapuratifomu akaoma kushambadzira nekuti vanhu vanoshandisa social media kuti vavaraidze uye vatsauswe kubva kubasa. Vanogona kunge vasina kunyanya kuda kufunga nezvebhizinesi ravo, kunyangwe ivo vari vanoita sarudzo. Hedzino nzira shoma dzekutyaira traffic uye kuishandura kuita shanduko, kutengesa, uye
Uri Kuita Instagram Marketing Zvisizvo? Tarisa paUchokwadi!
Chipiri, May 31, 2022 Chipiri, May 31, 2022 Ann Smarty
Zvinoenderana netiweki pachayo, Instagram ine vanopfuura bhiriyoni vanoshanda vashandisi panguva ino, uye iyo nhamba pasina mubvunzo icharamba ichikura. Vanopfuura 1% veAmerica vane makore gumi nemasere kusvika makumi maviri nemapfumbamwe vaishandisa Instagram muna 71. Kwemakore makumi matatu kusvika makumi mana nemapfumbamwe, makumi mana nemasere muzana evaAmerica vaishandisa Instagram. Pamwe chete, vanopfuura makumi mana muzana veAmerica vanoti vari kushandisa Instagram. Izvo zvakakura: Pew Research, Social Media Shandisa muna 18 Saka kana uri kutsvaga
Midhiya yemagariro inzira huru yekugadzira traffic uye kuziva kwemhando asi zvingave zvakanyanya kunetsa mukugadzira B2B inotungamira. Sei social media isingashande senge B2B yekutengesa funnel uye sei kukunda dambudziko iroro? Ngatiedzei kuzviona! Matambudziko eSocial Media Lead Generation Pane zvikonzero zviviri zvikuru nei masocial media mapuratifomu achinetsa kushandura kuita nzira dzinogadzira inotungamira: Kushambadzira kwesocial media kunovhiringidza - Kwete.